अब पद्धति नै फेर्नेतिर सोच्नुपर्ने हो कि
Tuesday, 08.29.2017, 11:56am (GMT5.5)
यहाँ स्थायीरुप लिएको विडम्बना के छ भने नेताहरु देश विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन पछि पर्दैनन् । तर, कर्मचारीलाई राजनीतिक पार्टीका मतियार र हतियार बनाउनाले नै कर्मचारी प्रशासनले गतिलिन नसकेको हो भन्ने यथार्थलाई बिर्सिदिन्छन् । विरलै अपवाद बाहेक यहाँ कर्मचारीहरु एउटा न एउटा पार्टीका पछि लाग्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । सरकारमा जुन पार्टी गए पनि आफ्ना पार्टीका पछिलाग्ने कर्मचारीलाई सबै छुट हुन्छ भने पार्टी निरपेक्ष अथवा विपक्षीको समर्थनले कुकुरले नपाउने दुःख पाएको हुन्छ । त्यसैले यदि इमानदारी नै हो भने प्रथमतः कर्मचारीलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतमा नराख्न र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेताहरु यथार्थमै प्रतिबद्ध भएर देखाउनुपर्छ । कुनै नेता त्यसका लागि तयार ? हैन भने थोत्रा गाला बजाएर मात्रै केही हुँदैन ।
हालै भूपू प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि कर्मचारीतन्त्र सत्तामुखी भएकाले आफू प्र.म.बाट निवृत्त भए पश्चात आफूले निर्णय गरेका काम नगरेको दोषारोपण गर्नुभएको छ । तर, यो कुरा सबैले सत्ता बाहिर आएपछि गर्ने गरेको सुनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र, जो सत्तामा आउँछ उसैका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनाले, सत्तामुखी त हुन्छ नै तर यहाँ ६–६ महिनामा फेरि सरकारका कार्यक्रम परस्पर बिरोधी हुन्छन् । सबैले आआफ्नै कार्यक्रम मात्र अघि सारेर पूर्ववर्तीका राम्रै योजना कार्यक्रम भए पनि तिनलाई पन्छाएर नाम कमाउन खोज्दा सबैका कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । फेरि ती कार्यक्रम देश र जनताको हितभन्दा आआफ्ना पार्टीको मात्र प्रचार हुने हिसावबाट गराउन खोज्दा विपरीत पर्ने गरेको सबैलाई थाहा छ ।
स्थायीरुप लिएको अर्को बिडम्बना यहाँ के छ भने मन्त्रिमण्डल बदलिनासाथ आआफ्ना पार्टी पक्षधर कर्मचारीलाई कमाई हुने अथवा आफ्नो पार्टीलाई सघाउ पुग्ने गरी राम्रा राम्रा ठाउँमा सरुवा गरिन्छ भने अरु पार्टीका अनुयायीलाई नराम्रा भनिएका ठाउँतिर फालिन्छ । त्यस्ता कर्मचारी काम गर्नुसट्टा आफ्नो अनुकूलको पार्टी या नेता सत्तामा कहिले आउला भनेर बसेका हुन्छन् । निरपेक्ष कोही छ भने त्यस्ताको खोजी कहिल्यै पनि हुँदैन । यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनको आत्मा नै समाप्त भएको स्थिति छ । दलीय पक्षधरताका आधारमा गरने सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र तक्मा, पुरस्कार दिने पक्षपाती व्यवहारले गर्दा कर्मचारी प्रशासन निष्प्रभावी भएको छ । ‘जता काफल पाके उतै चरी नाचे’ गर्नेलाई भने फलिफापै छ । जागिरै पनि सुरक्षित हुने हो कि होइन भन्ने धरमर भएपछि बीचकालाई त धानिनै गाह्रो छ । यस्तो स्थितिमा ढुक्का भएर कामगर्ने वातावरण र मनस्थिति खलबलिन्छ । आज यस्तै छ ।
यहाँ पद्धति (सिष्टम)मा चल्न कोही तयार देखिंदैन । पार्टीहरुले नै पद्धतिमाा चल्दैनन् र कर्मचारीलाई समेत विभाजन गरेर दलीय एजेन्टका रुपमा हिंडाउन खोज्छन् भने प्रशासन गतिलो भएन, कर्मचारीले काम गरेनन् भन्दै नेता र मन्त्रीहरु पानीमाथिको ओवाना देखिन खोजेर हुन्छ ? पहिले आफैंलाई हेर्नुपर्छ । आफ्ना भ्रष्ट आचरणलाई हेरेर मात्र अरुलाई भन्नुपर्छ । विद्यार्थीको भागवण्डा, कर्मचारी भागवण्डा लगाएर तिनैका आधारमा राजनीति गर्न थालेपछि नै निष्पक्षता, सदाचार र इमानदारीको त बीउ नै मासिसकेका छन् । त्यसैले सबै राम्रो होस् भन्ने स्वच्छ चाहना हो भने यो भागवण्डे राजनीतिक स्वार्थ छोडेर काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । सुधार गर्ने नै हो भने आफैंले पद्धति बसालेर अरुलाई डो¥याउनु पर्छ ।
दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ त हुन्छ नै, तर त्यसको पनि सीमा हुनुपर्छ । अनेक दाउपेचका परिबन्द मिलाएर सत्तामा जाँदैमा र मन्त्री हुँदैमा आफूर्ला सर्वज्ञ ठानेर प्रशासन बिथोल्नेहरुको पनि यहाँ कमी भएन । आफैं कुरुप बनेकाहरुले व्यवस्था र पद्धतिलाई समेत कुरुप बनाइसके । बिना सोचविचार हतार र हचपचमा लागूगर्छ खोजिएको संघीयताले कतै देशैलाई कुरुप बनाउने हुन् कि भन्ने डर भैसक्यो । मन्त्री हुनासाथ सचिव फेर्नुपर्ने, आफ्नो पार्टी सरकारमा जानासाथ व्यापक सरुवाा गर्ने, आफ्नालाई ठूलाठूला रकम आर्थिक सहायता दिएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने जस्ता क्रियाकलाप सामान्य भैसकेका छन् । मन्त्रालय हाँक्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व भएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका हीनभावनाले गर्दा प्रशासनमा स्थिरता आउन सकेको छैन । आफ्नै पदको महत्व नबुझ्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनलाई मात्रै दोषा दिएर हुन्छ ? आफ्रं अनुशासनमा रहेर मात्र अरुलाई भन्न सुहाउँछ । अनि मात्र अरुले टेर्छन् ।
संकीर्ण सोचाईले गर्दा एकातिर मन्त्रीपदलाई ज्यादै हलुंगो बनाइयो भने त्यसैकारण कर्मचारी प्रशासन समेत आफ्नो मर्यादामा रहन पाएन । खोभारी रायलाई समेत बिर्साउने खालका कोही स्थाविअलाई पाइखानामा थुन्ने, कोही आफ्नो लोग्नेको तरकारीको सामान भन्सार छुटाइदिएन भनेर प्रजिअलाई कुट्ने त यहाँ मन्त्री नै भए । समानुपातिक भर्ना भएका आधादर्जन बढी सांसदले त कूटनीतिक राहदानी नै बेचेर खाए । दलीय स्वार्थमा जस्ता पायो त्यस्तैलाई मन्त्री र सांसद बनाएर बेइज्जत भयो । पदको गरिमालाई पैसामा बेचियो, समानुपातिक घुरान बटुलियो । त्यसैले अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हो भने सांसदबाट मन्त्री बनाउने परिपाटी नै बदल्नुपर्छ ।
इमानदार भएर काम गर्ने हो भने सांसदले गर्नुपर्ने कामको महत्व बढी छ । कानुन बनाउने, कार्यकारिणीलाई नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरु नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका चाकडीमा दगुर्छन भने स्थिति कहाँसम्म विग्रेछ त ? यहाँ सबैलाई मन्त्री नै हुनुपर्ने भ्रष्टरोग निवारण गरेर सांसदहरुको मर्यादा जोगाउनका लागि पनि संसद बाहिरबाट सकेसम्म योग्य, सुशिक्षित र विदेशीका अगाड अडिन सक्ने, मोलतोल गर्नसक्ने खालका निरपेक्षहरुलाई मन्त्री बनाउने पद्धतिको विकास आवश्यक भैसकेको छ । नत्र सधैं यस्तै बहुलट्ठी तालले चल्दैन भन्ने कुरा स्थितिको गम्भीरताले देखाइसकेको छ । यसमा आजका योग्य सांसदहरुले आफ्नै मर्यादाका लागि पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।